Amanzi namapayipi endle series series - China Amanzi namapayipi endle abakhiqizi abakhiqizi, abahlinzeki
Quality Good Composite Pe Pipe Ngensimbi Wire Mesh ...
Ipayipi legesi le-HDPE
HDPE zokuxhumana tube
Ipayipi lokuhambisa amanzi le-PVC-U
Ipayipi le-HDPE eliqinisiwe
Ibhendi yensimbi ye-HDPE iqinise ipayipi lukathayela
I-steel belt iqiniswe i-polyethylene (i-HDPE) ipayipi evuthayo lukathayela luhlobo lwepayipi lodonga elenziwe nge-HDPE nensimbi yensimbi ye-fusion composite. Isakhiwo sodonga sakhiwa izingqimba ezintathu: ungqimba lwangaphakathi luyindonga eqinile yodonga oluqinile lwangaphakathi futhi ipayipi elingaphakathi lilimele futhi lihlanganiswe ngaphandle. Ibhande lensimbi lisongwe ku-U-shaped annular lukathayela wensimbi ukuqiniswa, futhi okuyinhlanganisela lukathayela steel strip ukuqiniswa kuhlanganiswe nengqimba efanayo yangaphandle ye-HDPE njenge th ...
HDPE emazombezombe isakhiwo kwaqinisa udonga uhlobo B ipayipi ubizwa nangokuthi i-HDPE emazombezombe isakhiwo odongeni ipayipi, carat tube, HDPE emazombezombe uhlobo B ipayipi, high kwabantu polyethylene emazombezombe ipayipi, uhlobo B isakhiwo odongeni ipayipi. Luhlobo olusha lwepayipi eliguquguqukayo elinesisindo esincane, amandla aphakeme, udonga lwangaphakathi olubushelelezi, ukumelana nokugqwala, ukumelana nokuguga, ukugqoka ukumelana, ukumelana nengcindezi, ukumelana nomthelela onamandla, ukuguquguquka okuhle, impilo nokuphepha. Ikhwalithi ye-weld iphakeme, umzimba uxhunyiwe, i-qua ...
Amapayipi akhethekile akhiqizwa ezintweni eziphakeme kakhulu ze-polyethylene enezindonga zangaphakathi ezibushelelezi, izindonga zangaphandle ezifakwayo, nezikhala eziyize phakathi kwezindonga zangaphakathi nezangaphandle zisetshenziselwa ikakhulukazi ukuthuthwa kwendle kanye nezinhlelo zokuhambisa amanzi. ngesikhathi sokukhiqiza. Udonga lwamapayipi anezingqimba ezimbili luqinile. Isebenzisa ukuxhumana okuguqukayo nezimpawu zenjoloba zemvelo, okulula ukuyifaka, exhunywe ngokuphepha, akulula ukuvuza, futhi inokuqonda okuphansi ...
PP odongeni kabili lukathayela ipayipi
Izinto zokusetshenziswa zokukhiqiza lo mkhiqizo ziguqulwa ngezinto ze-PP: udonga lwangaphakathi olubushelelezi nodonga olungaphandle lukhombisa ukuqhuma okuyingqayizivele, futhi izindonga zangaphakathi nezangaphandle ziyize. Ukumelana namakhemikhali nokumelana nokugqwala: Ukumelana nokugqwala kwemithombo yezindaba yamakhemikhali ehlukahlukene njenge-asidi, i-alikhali, usawoti, njll. Impact ukumelana: Udonga ipayipi usebenzisa isakhiwo esiyingqayizivele, impac ...